?Dagaalka aan ka wadno Somaliya waa mid aan ku difaacayno ummadda Maraykanka? R/wasaare Farmaajo. – Radio Daljir
?Dagaalka aan ka wadno Somaliya waa mid aan ku difaacayno ummadda Maraykanka? R/wasaare Farmaajo.
Washington, May 16 – Osama bin Ladin waa uu dhintay, haseyeeshee Mahamed Cabdulaahi Maxamed oo haatan ah Ra?isul wasaaraha Somaliya waxa uu sheegay in dhaq dhaqaaqa argagixisada oo uu abuuray Osama ay wali sifir fircoon ushaqaynayaan.
?Wax yar uun kadib marki ladilay Bin ladin waxa isoo gaartay hanjabaad dil ah taasi oo kadhalatay dilka ay cidamada maraykanku ugaysteen hogaamiyihi argagixisada? sidaasi waxaa yiri Maxamed Cabdulaahi Maxamed oo horay u ahaan jiray shaqale dawladda maraykanka ushaqeeya haseyeeshee shaqadiisa uga tagay si uu dalka Somaliya uga shaqeeyo.
Maalintii khamiisti ee todobaadki hore Ra?isul wasaare Farmaajo waxa uu booqasho kutagay aqalka Capitol Hill si uu mudanayaasha maraykanka ugu sheego in dawladiisu ay ubaahan tahay caawinaad iyo wakhti badan si ay xasiloni ugu sooceliso dalka ay xasilooni daradu dilootay ee Somalia.
Kadib markii uu lakulmay senator Charles E. Schumer farmaajo waxa uu usheegay in wax yar kadib dilkii Osama in ay soogaartay hanjabaad ay usoo direen taageerayasha Osama ee Somaliya oo gacanta kuhaya inta badan koonfurta Somalia iyagoo ugu hanjabay in ay dilayaan isaga iyo madaxweyne Sheekh Sharif sheikh Axmed.
?Maaha wax cusub hadeerna maadaama hogaamiyahoodi ladilay mooraalkoodu wuu soo laaban karaa haddii ay dilaan qof anigoo kale ah amaba madaxweynaha ayuu sii raaciyey ra?isul wasaare farmaajo oo aan sheegin nooca hanjabaadda loosoo gudbiyey iyo erayada kuqornaa midna.
?Waa urur meelo kala duwan kala jooga dabcana waxay fidiyaan fikradihii waallida ahaa ee Bin Ladin laakiin dhaq dhaqaaqoodu waa mid kala tagsan awoodna uleh in uu hawlahiisa sii wado? sidaasi waxaa yiri ra?isul wasaare farmaajo.
Mudanihi uu lahadlayey Ra?isul wasaare Farmaajo ee Schumer ayaa ushegay in uu siweyn ula dhacsan yahay dadaalka uu kubixinayo ladagaalanka argagixisada iyo xiriirka uu laleeyahay magaalada New York oo uu horay uga farmaajo uga sooshaqeeyey .
Ra?isul wasaare Farmaajo oo sanadii hore madaxweynaha Somaliya si lama filaan ah uu uga joojiyey shaqadii uu kahayey Maraykanka una magacaabay Ra?isul wasaaraha Somaliya ayaa sheegay in uu si xawli uga shaqaynayo in uu ladagaalamo argagixisada Somaliya dalkiisa mudada kala qaybsanaana uu dib isugu sooceliyo.
?waxaan samaynayaa waa in aan difaacayo dadka Maraykanka, dagaalka lagula jiro argagixisaduna waa in uu kadhacaa Muqdisho, ee maaha in uu kadhaco Buffalo iyo Manhattan? ayuu yiri Ra?isul wasaaraha Somaliya.
Buffalo iyo Manhattan labaduba waxay katirsan yihin magalada New York iyadoo Buffalo ay tahay meeshii uu kashaqaynayey Farmaajo ka hor intii aan loo magacaabin xilka uu haatan hayo.
Ra?isul wasaare Farmaajo waxa uu mudanayaasha maraykanka usheegay in Somaliya ay ubaahan tahay wakhti dheeraad ah si ay xal uga gaarto kala qaybsanaanta dhinaca siyaasadda ah ka hor inta aan lagaarin doorashada bisha August.
Maalintii Arabacadii ee todobaadkii hore Ra?isul wasaaraha Somaliya waxa uu fariin noocasi oo kale ah u gudbiyey golaha amaanka ee qaramada midoobay kaasi oo markii danbe isku racay qaraar ay kumuujiyeen sida ay uga walaacsan yihiin kala qayb sanaanta siyaasadeed ee golaha amaanka.
Bishii Febraayo ee sanadkan baarlamaanka Somaliya waxa uu sameeyey xilli korarsi 3 sano ah go?aankaasi oo ay diiday xukuumada Somalia iyadoo codsatay in xiliga dawlada oo dhan lagu kordhiyo 1san oo kaliya.
Ra?isul wasaaraha Somaliya waxa uu sheegay in uu maraykanka utagay si uu qaramada midoobay kadhaadhiciyo in loobaahan yahay in isbadal parlamaanka lagu sameeeyo haseyeeshee mar wax laga waydiiyey waxa qorshayaashisa shaqsiga ah ay yihiin marka xiliga doorashada lagaaro waa uu kagaabsaday in uu wax kayiraahdo.
Waxaana uu sheegay in uu ka hadli karo oo kaliya waxa uu maanta samaynayo.
Axmed Max?ed Faarax ?Jookar?